အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အခြောက်ခံစက် / အိမ်သုံးမှုတ်တံ
စမတ် ဦး ဆောင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေမှုတ်စက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှုတ်တံ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
လျှပ်စစ် Air Pump
Nano ပူဖောင်း spa စက်
စတုတ္ထထပ်，အဆောက်အအုံ No.3，Yadi နည်းပညာပန်းခြံ，အမှတ် ၄ Hetai လမ်း，Helong လမ်း，Baiyun ခရိုင်，ကွမ်ကျိုး，တရုတ်
Happy Bear ခွေးခြောက်စက်သည်သေးငယ်သည်, ရေကိုမှုတ်ထုတ်နိုင်သည့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အခြောက်စက်, ဖုန်, အပျက်အစီးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှ undercoat ကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာ. ၎င်းတွင်လေစီးနှုန်းနှင့်အပူချိန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်. ဒီနည်းပညာ၏အောင်မြင်မှုများသည်သဘာဝအပူနှင့်တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, insulator တွင်လည်းစစ်ဆင်ရေး. ၎င်းသည်သီးသန့်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်. ၎င်း၏အခွံပါ ၀ င်ပစ္စည်းများနှင့်လေထွက်ပေါက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်. လေမှုတ်စက်သည်ဆူညံသံနည်းသည်, လေပြင်းမုန်တိုင်း.
Angels စီးရီးဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေမှုတ်စက်, အပြည့်အဝပလပ်စတစ်အခွံ, အဆုံးမဲ့ variable ကို, အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စူပါလေတိုက်နှုန်း, နှစ်ဆမော်တာထက်ပိုကြီးတဲ့လေတိုက်, ၎င်းသည်အစိုဓာတ်ကိုလျင်မြန်စွာထိရောက်စွာမှုတ်ထုတ်နိုင်သည်, ဖုန်မှုန့်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အောက်ခြေ fluff အတွက်အပျက်အစီးများ, အောင်မြင်သောနည်းပညာသည်သဘာဝအပူနှင့်လုံခြုံသောလျှပ်ကာဖြင့်လည်ပတ်စေသည်, သီးသန့်ဒီဇိုင်း, အခွံမာကျောပြီးအလွန်မြင့်မားသောလေထွက်ပေါက်၏စုံလင်သောပေါင်းစပ်မှု, လေနှင့်နိမ့်ဆူညံသံ.
မြင့်မားသောအလျင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခွေး / အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စွမ်းရည်ခြောက်သွေ့ / မှုတ်တံ
PAN ENGLE isaset of pet dryer which uses the U.S. imported AMETEK motor. There is no domestic manufacturer of the motors being capable of producing such high-performance motor section. Besides, its shape is unique.Therefore,it has the patents for its appearance, utility models and so on. The product uses engineering materials and deep processing of high strength shell protection, multistage insulation safety, multi-channel stability control design.The service life can be up to 1800 နာရီ, which is three times longer than the life of the domestic motor. It is the rationale blaster container with the highest coefficient that complies with international standards.
NBF အလျင်အမြန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်ခြောက်စက် - Blower Grooming Dryer with Heater Dogs & Cats, stepless ချိန်ညှိမြန်နှုန်း, အပူလျှပ်ကာ
The breakthrough technology of the pet dryer brings natural heating and quiet, insulated operation to improve productivity in grooming shops. Powerful, high velocity dryer deliversahigh volume of warm air to blow out the water in the underlying fluff of the pets. Infinitely adjustable-speed air-conditioning blowing machine has the auxiliary heating function. This dryer has two power switch lights andadelicate gear knob, which makes users feel relieved to use in anytime and anywhere. The unit hasa3 meters puncture-resistant flexible hose and four nozzles. The machine is made of steel, and the construction of the dryer is rugged and durable. It is of humanized beehive bottom cover design. It has dual mounted legs, which allows both vertical and horizontal use. လေမှုတ်စက်သည်ဆူညံသံနည်းသည်, လေပြင်းမုန်တိုင်း. The air temperature will not be too high, so as to avoid damaging the hair of pets, which greatly improves the working efficiency.